Nepal Telecom 4G Archives - Technology Khabar
» Nepal Telecom 4G
अनुज राज देशभर लकडाउनका कारण मानिसहरु घरमा नै बसिरहेका छन भने अत्यावश्यक काम बाहेक बाहिर जान प्रहरीले रोक लगाएको छ । यस्तो बेलामा अधिकांश मानिसहरु इन्टरनेटमा व्यस्त रहेका छन् । […]
कोरोना भाइरस महामारी रोकथाम र नियन्त्रणको लागि नेपाल सरकारले मिति २०७६ चैत्र ११ देखि १८ सम्म पूर्ण लकडाउन घोषणा गरेको सन्दर्भमा नेपाल टेलिकमले मोबाइल सेवाको प्रयोगलाई थप सहज बनाउन उक्त […]
कति कुरा गर्न मन छ ? टेलिकमको भ्वाइस प्याक लिनुस् र आफ्ना प्रियजनसँग मन खोलेर कुरा गर्नुस्
आफ्ना प्रियजनसँग मोबाइलमा दिल खोलेर कुरा गर्न मन छ, तर ब्यालेन्स सकिएर दिक्दार बन्नुभएको छ ? हालको विषम परिस्थितिमा त झन् धेरै कुरा गर्न मन लाग्छ होला । यो अवस्थामा […]
डाटा प्याक सकिएर चिन्तित हुनुहुन्छ ? अब चिन्ता लिनु पर्दैन । नेपाल टेलिकमले उपलब्ध गराइरहेका वान आवर अनलिमिटेड प्याक, अनलिमिटेड नाइट डाटा प्याक लगायत अफरहरु सस्तोमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । […]
नेपाल टेलिकमको ३२१०० नम्बर डायल गर्नुस्, कोरोना भाइरसबारे जानकारी निशुल्क सुन्नुस्
नेपाल टेलिकमले ‘NT सूचनाको संसार’ सेवामार्फत कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) बारे जानकारीमूलक उपयोगी सामग्री आफ्नो मोबाइलमार्फत ३२१०० नम्बर डायल गरी निशुल्क सुन्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । उक्त नम्बरमा कल गरे […]
काठमाडौं । तपाईलाई एकै पटक धेरै डाटा प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ? त्यसो भए अब चिन्ता गर्नु पर्दैन । यसको समाधानको लागि नेपाल टेलिकमले लार्ज डाटा प्याक उपलब्ध गराइरहेको छ […]
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले कलसँगै ब्यालेन्सको बिबरण ग्राहकहरुलाई भएको छ । कम्पनीले हरेक पटक मोबाइल कल समाप्त भए लगत्तै जानकारी दिनेगरि ‘ईण्ड अफ कल’ सेवा संचालन गर्ने भएको हो । […]
नेपाल टेलिकमको ब्रान्ड एम्बेसडरमा क्रिकेट खेलाडी पारस खड्का, एक वर्षभरी ब्रान्ड प्रबर्द्धन गर्ने
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान एवं चर्चित खेलाडी पारस खड्कालाई ब्रान्ड एम्बेसडर चयन गरेको छ । यस सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम […]
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले बाग्लुङ्गको ताराखोला गाउँपालिका १ अमरभूमिमा नवनिर्मित नमस्ते मोबाइल टावरबाट चौंथो पुस्ताको फोरजी सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ। सोमबारदेखि गलकोट नगरपालिका ५ टेउवा धुरीमा आयोजना गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय मूर्तिकला […]
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो अर्थवार्षिकमा नेपाल टेलिकमले २१ अर्ब ९२करोड ६८ लाख ४१ हजार ६९७ रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । कम्पनीले चालु आवको पहिलो ६ महिनामा ग्राहकहरुबाट १८ […]
नेपाल टेलिकम गल्याङद्वारा साढे दुई हजार निःशुल्क सिम वितरण, सिममा रु.५० टक भ्यालु समेत
काठमाडौं । नेपाल टेलिकम, दूरसंचार कार्यालय गल्याङले दुई हजार पाँच सय निःशुल्क सिम वितरण गरेको छ । गल्याङ चेम्बर अफ कमर्शले आयोजना गरेको १० दिने महोत्सवका अवसरमा उक्त सिम वितरण […]
नेपाल टेलिकमले ल्यायो विन्टर अफर, यस्ता छन् अफरभित्रका सेवा, आफैं रोज्नुस् कुन चाहिन्छ
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले विभिन्न प्याकेज सहितको आकर्षक विन्टर अफर उपलब्ध गराएको छ । उक्त अफर अन्तर्गतको सेवा कम्पनीको वार्षिकोत्सव माघ २२ गतेदेखि नै लागू भइसकेको छ र आगामी चैत […]
काठमाडौं । संचार तथा सूचना प्रबिधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) को वार्षिकोत्सवमा असन्तुष्ट कर्मचारी पक्षको मागलाई व्यङ्गय गर्दै आफ्नी आमाको जन्मदिनका दिन म‌ंगल धुन बनाउने […]
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले आफ्नो १६ औं वार्षिकोत्सव मनाईरहँदा ७७ जिल्लामा फोरजीसेवा बिस्तार भएको जानकारी दिएको छ । कम्पनीले हुम्लाको सिमकोटमा मंगलबार फोरजी जडान र परीक्षण गरेसँगै देशभरका ७७ जिल्लामा […]
काठमाडौं । नेपाल टेलिकम र नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभागबीच सडक र दूरसञ्चार पूर्वाधार निर्माणको क्रममा सहकार्य गरी अगाडि बढ्ने समझदारी भएको छ । यस सम्बन्धी […]
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमका सबै सञ्जालले काम गर्न छाडेपछि मुगु जिल्ला चारदिनदेखि सञ्चारविहीन भएको छ । जुम्लाको डाँफे लेकमा अवस्थित टेलिकमको टावरको रेडियो लिङ्कमा हिमपातले समस्या ल्याएपछि सो टावरबाट मुगु […]
भारी हिमपातका कारण डडेल्धुरा सदरमुकामसहित ग्रामीण बस्तीमा सञ्चार सेवा अवरुद्ध
अमरगढी । भारी हिमपातले डडेल्धुरा जिल्ला सदरमुकामसहित ग्रामीण बस्ती सञ्चार र बिजुली विहीन बनेको छ । बिहीबारदेखि तापक्रम झर्दो अवस्थाले इन्टरनेटलगायतका सञ्चार सेवासमेत अवरुद्ध भएका छन् । लामो तथा छोटो […]
फोरजी बिस्तार गरेको असोजमा टेलिकमका ३ हजार ग्राहक मात्रै थपिए, एनसेलको भने २ लाख बढे
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले आफ्नो ४जी सेवा देशभर बिस्तार गर्दा पनि अपेक्षाकृतरुपमा सेवाग्राहीहरु बढाउन सकेको छैन् । कम्पनीले अन्य ४जी सेवा प्रदायकहरुको तुलनामा निकै कम सेवाग्राहीहरु असोज महिनामा थप्न सकेको […]